Allaatti Nyaachuu Barbaadaan Maqaa Gogorrii jedhuun |
Home Afaan Oromoo Allaatti Nyaachuu Barbaadaan Maqaa Gogorrii jedhuun
By Barroo Goobee, Adoolessaa 22, 2020
Mootummaan nafxanyaa kan Abiyyiin durfamuu Oromiyaa fi ummata Oromoo irrattii waraana labsee jira. Waranni amma Oromiyaa fi ummata Oromoo irratti labsame kun, weeraa Mootichi Shawaa Minilik, nyaaphini Ankobar, waggaa 150 dura ummata Oromoo irratti bobbaasee saniin wal fakkaata. Akkumma Minilik, ummata Oromoo yeroo san gara nyaatoo tokko malee, harka muruun, harma muruun, dhiira jayna akka kormaa kolaasuun, ummata Oromoo salphinnaan ufjalattii bulche, Abiyyi Ahmad ar’a qeerroo fi qarree Oromoo akkasumasa ummata Oromoo bal’aa jaynummaa sonaatiin Wayyaanee ufirraa maqaleetti galchan kana waraanaa feederaalaati fi “poolisii naannoo Oromiyaatiin” akka sareetti ajjeessaa jira. Kan du’a irraa baraare immoo mana hidhaatti guuraa jira. Akkumma Minilik ummata Oromoo lafa irraa duguugee mootii taye san, Abiyyi Ahmadiis waan haati isaa, gafaa inni wagga torbaa, “mootii taataa” jetteen san dhuga’oonfatee, ummata Oromoo cabsee mootii taya jedhee abjoota jira. Barcumaa ar’aa irraa taa’uu fi mana Minilik inni keessa galuu kanaan ka isa gaye wareegama qeerroo, qarree fi ummata Oromooti, maqaa Oromootiin achi dhaqe. Odoo nama galata beekuu taye, Abiyyii silaa ar’a Oromoo hin ajjeesuu.
Gochi Abiyyi kun kan nuttii argisiisuu sirni nafxanyaa yoo diigame malee, Oromoon biyya san keessattii nagayaan jiraachuu akka hin dandeeneedha fi Oromiyaan jiraachuu akka hin qabnedha. Ammalle, odoo Oromiyaan hin bilisoomne, mirgi ummata Oromoo kabajaamuu akka hin dandeenne, sirni federaalizmii fi dimokraasii biyya san keessatti hidda godhacuu akka hin dandeenne nuti hima. ‘’Haga nu jirru Itiyoophiin hin diigamtu” Jedhee Abiyyii torbaan muraasa dura masaraa Minilik keessaa bookkisuun, waan sirni nafxanyaa Itiyoophiyaa, Oromiyaan akka hin jiraannee fi ummatni Oromoo mirgi isaa akka hin kabajachiifneef Abiyyii fi nafxanyoon issa marsan marxifatanii akka ka’aan nu agarsiisaa.
Warannii amma Oromoo fi Oromiyaa irratti deemaa jiru kun immoo waan amma Hacaaluun ajjeefamnaan tasa/ dingata jalqabame odoo hin taanee, kan duraanuu ummata Oromoo jilbiifachiisuuf ittii yaadamee deema ture. Ajjeechaan Hacaaluu, sababa mootiin nafxanyaa Abiyyii Ahmad carraa ummata Oromoo daranuu ittiin lafaa fixun tayeef.
Akkummma Oromoon marruu bareechisee beekuutti, wayyaaneen ummata Oromoo yoo ajjeeftu, hiitu, fi dararrtu, maqaa yookiin tapheellaa ABO jedhuu itti maxxansiteeti. Abiyyii fi bilxiginnaan immoo taapheelaa “Shanee” jedhuu ummatta Oromooti maxxansuudhan. Jaawaarii fi Baqala hidhuu duraanuu murteefatan. OMN cuufuu duranuu murteefatan. ABO illee balleesuu duraanuu murteefatan. Ji’a lama dura, Jawaar hidhamu qaba; midiyaan OMN cufamuu qaba jedhanii Tayyee Danda’aa, Hangaasaa Ibrahiim, fi Jaafar Ali Nubia media irratti ololaa akka turan ni yaadatama. San godhuun isaanii waan amma tayee kanaaf qophaayaa akka turan namatti akeeka. Akkasums, hidhaan hoggantoota ABO Abdii Raggaasaa fi kan biroollee kanuma agarsiisa.
Garuu, murtii Jawar Mohammed fi Baqala Garbaa hidhuuf, OMN cuufuuf, ABO balleesuuf, fi qeeroo balleessuuf godhan kana hojii irra oolchuuf sababa barbaaduu isaan irraa ture. Duuti Hacaaluu kun sababa issan barbaadan sanniif carraa gaarii tayeef. Eegaa kanuummaf, Hacaaluu “Shanee” ajjeese jedhanii imimaan nyaachaa booyaa jiru. Nyaachi yoo waa ajjeefatee nyaatuu ijji hin booti, akka waan du’e sanii gadduutti. Booyichi Abiyyii fi Shimalis Hacaaluuf booyyan booya nyaachati. Eegaa kanummaf, OMN gaafii fi debii Hacaaluun wajjiin taasise irraa waa dhoysuuf irraa mure jedhanii, Shaneen wal qabsiiuuf yaalan.
Gabaabamatti dubbiin akka maymaaksaan jedhamu, “allaatii nyaachuu barbaadan maqaa gogorii jedhaniin” san taate. Oromoo midhuuf “Shanee” jechuu qabu. Yoo “Shanee” jechuun Oromoo jechuu kan tayu taate, ummani Oromoo marruu Shaneedha. Akka Haliimaa galmoo jette, “Oromummaan kufnee, Oromummaan kaana. Dhuma irratti, waraana bifa haarawaan biyyaa fi ummata keenna irrattii baname kana karaan mirga irrattii argannuun tokkummaa Oromoo cimsatuu qofa. Tokkummaa keenna haa jabeefanu.
Injifannoon ka ummata Oromooti!
Previous articleEthiopia makes controversial statements on filling GERD
Next articleFamily of slain Ethiopian singer mourns their ‘hero like a lion’